Filtrer les éléments par date : vendredi, 09 avril 2021
Pilo kely : Zaho aloha tsy tafiditra anaty fanisana, firy amiko ny mitsabo tena amin'izao
Azako antoka fa diso ireo fanisana rehetra avoaka ireo, mila manova tetik'ady ny mpitondra fa mety efa mihanaka io aretina io fa miandry tsy fanjariana kely amin'ny vatana fotsiny dia mamely.
Ahibohy ireo marefo fa tena en danger, maro ny tsy mahatakatra ny saran'ny fitsaboana raha sanatria ka mihombo.
Fikatonan’ny faritra : Midangana ny saran-dalana
Hilela-maina aza atao koa mainka fa misy tantely ny molotra, araka ny fiteny.
Midangana izaitsizy ny saran-dalana any amin’ireo faritra dimy izay mikatona noho ny fepetra ara-pahasalamana.
Misy hatrany ireo mahita lalana ambanin’ny tany, araka ny fiteny mahazatra, na dia milaza ho hentitra amin’ny fanaraha-maso aza ny fitondram-panjakana.
Manodidina ny 50 000 Ariary mihoatra avokoa ny saran-dalana any amin’ny faritra tsy mihidy mihazo ny faritra mihidy mifanila aminy.
Ny alahady andron’ny Paska taorian’ny nanambaran’ny filoha Rajoelina Andry ny fepetra fotsiny, ohatra, dia niakatra ho 50 000 Ariary avy hatrany tampoka teo ny saran-dalana Antananarivo-Ambatondrazaka, raha 20 000 Ariary ny mahazatra.
Araka ny tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra omaly 07 aprily 2021 dia hisy ireo fiara manokana ahitana miaramila sy mpitsabo hitety ireo faritra ahitana marary betsaka, ka izy ireo no hizara fanafody sy hijery ifotony ireo marary sy ireo mitondra ny tsimokaretina, na ahiana ho mitondra ny tsimokaretina manerana an’ Antananarivo sy ny manodidina.
Mitohy hatrany etsy ankilany ny fanentanana ny tsirairay hanaraka ireo lamina napetraka sy ireo fepetra noraisina hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina.